Kenya na-elekwasị anya na njem nlegharị anya Africa iji belata mmetụta COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya » Kenya na-elekwasị anya na njem nlegharị anya Africa iji belata mmetụta COVID-19
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Kenya Tourism Board na-agbusi mbọ ike ịzụ Kenya na Afrika ndị ọzọ site na ịtụkwasị anya ahịa ndị isi na mpaghara Africa.
Kenya abụrụla ebe a na-eme njem nleta maka ahịa ọwụwa anyanwụ na Central Africa, na-adabere na ọrụ ikuku ya dị elu na ụkpụrụ ọbịa dị elu.
Kenya Tourism Board nwere nzukọ na ngwụsị izu gara aga na ndị ọrụ njegharị si Uganda, Rwanda na Etiopia na obodo ndị njem nleta n'ụsọ osimiri nke Mombasa.
A na-ahuta njem nleta n'Africa dị ka ahịa na-eto ngwa ngwa n'ụwa niile, ndị ọkachamara na-ahụ maka njem na-ahụ ọnụ ọgụgụ ndị njem na kọntinent ka toro na 8.6%.
Banye ego n'ahịa njem nlegharị anya nke ndị Africa na nke a na-enwetabeghị, Kenya na-eme atụmatụ dị oke mkpa ugbu a iji dọta ndị njem si mba ndị ọzọ dị n'Africa, na-achọ ịme ngagharị ngwa ngwa ngwa ngwa mbute ọrịa COVID-19 kpatara.
Kenya njem njem nleta (KTB) n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya gbasiri mbọ ike ịzụ Kenya na Afrika ndị ọzọ site na ịtụkwasị anya ahịa ndị isi na mpaghara Africa.
Ọ bara ọgaranya na anụ ọhịa, akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị ọdịbendị, Kenya so na mba Africa ndị tara ahụhụ site na ọrịa mgbasa ọrịa COVID-19 nke a hụrụ site na ala ndị njem nleta sitere isi mmalite ahịa Europe na United States of America.
Kenya abụrụla ebe a na-eme njem nleta maka ahịa ọwụwa anyanwụ na Central Africa, na-adabere na ọrụ ikuku ya dị elu na ụkpụrụ ọbịa nke ndị ọbịa karịa mba ndị ọzọ dị na East na Central African mpaghara.
N'iji ohere nke ọrụ ikuku ya nke mepere emepe, ụlọ nkwari akụ na ebe obibi na njem nlegharị anya na njem njem, Kenya na-achọzi ndị ọbịa Africa ka ha gbakwunye ma mejupụta oghere nke njem njem mba ụwa kpatara.
Kenya Tourism Board (KTB) kwuputara n'oge na-adịbeghị anya na ire ahịa nke Kenya dị ka ebe mara mma maka ndị ọbịa si n'akụkụ ndị ọzọ nke kọntinent a abawanyela ike mgbe mfe nke mgbochi njem njem COVID-19 nke ọtụtụ steeti Africa.
Onye njikwa KTB Corporate Affairs Wausi Walya kwuru na enwere nnukwu njem na njem njem na mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka na ahịa Afrịka nke ndị Board ga-ejide site na nyiwe dị iche iche gụnyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Ndi otu a nwere nzuko na ngwucha izu ikpeazu ya na ndi oru njem site na Uganda, Rwanda na Etiopia na obodo Mombasa bu ndi njem nleta.
Kenya ga-ahazi njem dị iche iche maka ndị na-eme njem nlegharị n'Africa ka ha mara ha ebe mara mma na mba ahụ, gụnyere oke osimiri dị n'ụsọ oké osimiri, ebe nsọ anụ ọhịa na ebe ndị mgbe ochie, Walya kwuru.
O kwuru na "Kenya tụlere ahịa ndị njem n'Afrịka dị ka nke dị mkpa, ebe Uganda na-ebute ndị ọbịa na mba a".
Ihe ndị KTB na-eme ugbu a ga-eme ka ndị bịarutere njem nleta n'oge a mgbe njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-esite na nsonaazụ ọrịa COVID-19.
Ndi otu a na acho ime ka ndi njem gaa otutu ebe di iche-iche na Kenya, na-acho ime ka ndi mmadu bia ahia nke ndi Kenya ka ha nwee ike ime njem nleta iji dota ahia ahia na mpaghara na nke Afrika.
A haziri oriri mmanya pụrụ iche maka ndị njem 15 na ndị na-eme njem nlegharị si Uganda, Rwanda na Etiopia bụ ndị nọrọ otu izu iji gosipụta ngwaahịa nke ebe ndị njem nlegharị anya Kenya.
Otu ndị ọrụ njegharị na mpaghara ahụ gara ebe ndị njem nleta dị mkpa nke Nairobi, Nanyuki, Maasai Mara, Tsavo, Diani, Malindi na Watamu na njem iji hụ ọtụtụ ebe ndị njem nlegharị anya Kenya nwere ike ịnye ma ndị Africa ma ndị njem safari.
A na-ahuta njem nlegharị anya n'Africa dị ka ahịa na-eto ngwa ngwa n'ụwa niile, yana ndị ọkachamara na-ahụ maka njem na-ahụ ọnụọgụ njem nlegharị anya na kọntinent ahụ toro na ọnụego 8.6 n'ime afọ ndị gara aga ma e jiri ya tụnyere nkezi ụwa nke asaa.
Kenya Tourism Board kwuru na ịkwalite njem nlegharị anya na Africa nwere ike n'otu oge ahụ mee ka ọgbọ nke ohere dị na Mpaghara Azụmaahịa Na-ahụ Maka Ọchịchị n'Africa (AfCFTA) na mkpa ịkwalite uto na imekọ ihe ọnụ n'etiti ebe ndị njem nleta n'Africa iji nweta ikike dị na kọntinent.
Tanzania na Kenya akwadola mmegharị n'efu maka njem mpaghara na nke mba ụwa mgbe ndị isi si mba abụọ gbara agbata obi kwenyere ịkwalite njem mpaghara na njem ndị mmadụ.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na - arụ ọrụ ugbu a na ọtụtụ ebe ndị Africa ga - eme ka njem intra-Africa gafere site na nyiwe ndị njem mpaghara.